Li'onaardo da Viinchi ( Afaan Ingiliish: Leonardo da Vinci; IPA: liːəˈnɑːrdoʊ ˈvɪntʃi; 14/15 Ebla 1452 - 2 Caamsaa 1519) polymath xaaliyanii kan gaafa Haaromsaa Ol Aanaa kan bal'inaan dibaa gurguddoo yeroo hundaa keessaa tokko ilaalamudha (dibata isaa 25 gad ta'an qofti hafuus). Monaa Lizaan hojii Li'onaardo akkaan beekamaa fi fakkii akkaan beekamaa yeroo kamu ta'eedha. The Last Supper dibata amantaa baay'ee maxxanfame yeroo kamuu yoo ta'u fakkiin isaa Vitruvian Man immoo kan akka mallattoo aadaa ilaalamuudha. Akkasuma kitaabota yaadannoo isaa gubbatti fakkii fi yaadanno saayinsii fi kalaqa kannen anatomy, cartography, halluu dibuu, fi palaeontology dabalatu irratti hojjatuun beekama. Kuusaan Hojiiwwan Li'onaardo kan Michelangelo qofaan walgituun dhaloota artiistoota boodaaf gumaacha godheera.
Mana ijoollumma Li'inaardi Anchiano, Vinci, Itaali.
Sirriitti Leonardo di ser Piero da Vinci jedhamu,[d d Leonardo kan dhalate wedlock gara notary, Piero da Vinci, fi dubara peasant, Caterina, Vinci, naannoo Florence, Italy. Leonardo istuudiyoo haareffama xaaliyaanii painter Andrea del Verrocchio keessatti barate. Jireenya hojii isaa kan duraan ture Ludovico il Moro Milan keessatti, boodas Rome, Bologna fi Venice keessatti hojjete. Biyya Faransaayitti waggaa sadan darbe, bara 1519. tti du ' e.
Ta ' ullee leenjii idilee hin qabu, seenaa fi beektota hedduu Leonardo akka muummicha ministeeraatti ′′ Renaissance Man ′′ yookiin ′′ waliigalaa Genius ", nama dhuunfaa ′′ curiosity ′′ fi ′′ yaada hin amanamne ′′ fi ′′ yaada cimaa."[ 6 6 Inni sirritti yaada namoota danddetti adda ta ' e kessa tokko kan akka jirenya hin qabnne.[10 • Akka artti seena Helen Helen Gardner, scope fi fedhi isa osoo hin eegin seena galme kessatti, fi ′′ his Sammuu fi eenyummaan keenya waan guddaa nutti fakkaatu, yeroo namichi of danda 'ee fi remote."[ 6 • Beektonni ilaalcha isaanii addunyaa kana hiikanii logic keessatti hundaa' an, haalli empirikaala inni fayyadame yeroo isaaf hin taanetti.[11 ]
Leonardo teeknolojii isaa irra deebi ' ee jira. Maashinii balali ' aa, konkolaataa lolaa gosa lolaa, humna solar, maashinii dabaluu, fi isa dachaa. Firri dizayini isaa muraasni kan ijaaraman yookin yeroo jirenya isati, akka saayinsawa ammayya ' a fi injineringi qofa turani yeroo jijjiramatti. Invention isaa xiqqa tokko tokko, garuu, addunyaa oomishaa hin taane seene, kan akka bubbee bobbin fi maashina cimina shiboo yaaluuf. Inni yeroo tokko tokko walitti bu ' iinsa parachute, helicopter, fi taankii.[14 • Inni yeroo tokko tokko anatomy, civil engineering, geology, optics, fi hydrodynamics, garuu inni hin hojjenne Barbaacha isaa maxxansi akkasumas isaan xiqqoo turan saayinsii kallattii irratti dhiibbaa hin qaban.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci&oldid=37041" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 28 Adooleessa 2021, sa'aa 06:54 irratti.